पल शाह र समीक्षा अधिकारी बिवाद : के भन्छन पल शाह ? [अन्तर्वार्ता] - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीको सम्बन्धले फिल्मी बजार तातेको छ। उनीहरुको सम्बन्धले नयाँ मोड लिएको सनसनीपूर्ण खुलासा नेपालको एक चर्चित अनलाइन न्यूज पोर्टलले गरेको छ।नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारी पछिल्लो केही समय देखि मिडियासँग भागि रहेका छन् । उनीहरूको डर एउटै छ, आफूहरू बीचको अन्तरंग सम्बन्धबारे सोधि नसक्ने प्रश्न । करिब दुई महिना अघि देखि समीक्षा र पलको ‘प्रेम प्रकरण’ बारे कलाकारिता क्षेत्रमा चियोचर्चो सुरू भएको थियो ।
तर, सार्वजनिक चर्चामा आइसकेको थिएन । अब भने यो विषय लुकाएर लुक्ने अवस्था रहेन । उनीहरू दुवैले बोल्न नचाहे पनि वा अस्वीकार गरे पनि एक–कान दुईकान हुँदै छ्याप्छ्याप्ती भइसकेको छ । हिजो एक राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने फिल्मी कार्य क्रममा उनीहरूको सम्वन्धबारे प्रश्न उठाइएपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले जिज्ञासा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
दुवैजना पब्लिक फिगर भएको हुँदा यसबारे सरोकार राखिनु अस्वभाविक होइन । आखिर के हो त वास्तविकता ? पलसँगको संक्षिप्त प्रश्नोत्तर
समीक्षा अधिकारी र तपाईंको सम्वन्धको चर्चा व्यापक नै हुन थाल्यो, वास्तविकता के हो ? मैले पनि बाहिरबाट सुनेको हल्ला हो । तर, हामीबीच त्यस्तो केही छैन ।
हामीले म्युजिक भिडिओमा एउटा टिममा बसेर सँगै काम गरेका हौं । टिममा काम गर्दा नजिक भइन्छ । सँगै बसिन्छ, खाइन्छ । त्यो स्वाभाविक हो । अफेयरको कुरा चाहिँ विल्कुल सत्य होइन । मेरा दु’श्मनहरूले यस्तो नचाहिँदो प्रचारवाजी गरिरहेका छन् ।’
भविष्यमा तपाईंहरूको विवाहको सम्भावना नै छैन त ? अहिले त्यस्तो केही पनि प्लानिङ गरिएको छैन । तर, भविष्य त कसले देख्न सक्छ र ?यति हल्ला चलिसकेपछि आफ्नो तर्फबाट स्पष्टीकरण दिने विचार गर्नुभएको छ ?
मैले यसलाई ठूलो इस्यू नबनाउँ भनेर कतै नबोलेको हो । मेरो पनि फेमिली हुनुहुन्छ, उसको पनि फेमिली हुनुहुन्छ ।
यस्तो कुराले फेमिलीलाई असर गर्छ भनेर सञ्चारमाध्यमलाई हामीले जथाभावी नलेखिदिन आग्रह गरिरहेका छौं । समीक्षा त एउटा राइजिङ स्टार पनि हो । उसको भर्खरै बन्न लागेको करिअर नबिग्रियोस भनेर सञ्चारमाध्यम पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । यस विषयमा म एक–दुई दिनमा सार्वजनिक रूपमै आफ्ना कुराहरू राख्नेछु ।
(यस विषयमा समीक्षाले भने हामीसँग कुरा गर्न चाहिनन् । उनले आजै टीकटकमा एउटा भिडिओ पोष्ट गरेकी थिइन् । उक्त भिडिओमा उनले ‘कुरा का’ट्ने मान्छेले का’टुन्‘ तर तिमी र म छुट्नु भएन’ बोलको गीतमा लिपसिंक गरेकी छन् । केही घण्टापछि उनले त्यो भिडिओ हटाइन् ।) नेपालप्रेसवाट